Mankany amin'ny Lockdown fahatelo ve i Italia?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Italia » Mankany amin'ny Lockdown fahatelo ve i Italia?
Vaovao Mafana Italia • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny loza mety aterak'i Italia amin'ny fidirana amin'ny dingana fahatelo amin'ny Areti-mifindra COVID-19 mampatsiahy ny andian'ondry tsy misaina voafitaky ny mpiandry azy sy ny alikany.
Ny tsy fankatoavana ny ampahany betsaka amin'ny italiana (indrindra ny tanora) tsy mitandrina ny fiarovana aroso manohitra ny COVID-19 izay navoakan'ny mpitondra politika isan'andro, dia nahatonga ny firongatry ny aretina isan'andro isan'andro nataon'ny dokotera manam-pahaizana, nanambara mialoha ny mety hisian'ny dingana fanidiana COVID-19 fahatelo.
Saingy, ny tsy fankatoavana dia noho ny fisavoritahana lehibe nateraky ny fanovana isan'andro ny torolàlana ataon'ny andrimpanjakana. Andian’ondry voafitaky ny mpiandry azy ary ny alikany dia andian’ondry very hevitra tokoa.
Fantatra fa ny dingana faharoa an'ny COVID-19 any Italia dia noho ny tsy fahampian'ny fahitan'ny mpanao politika ny fanomezana fahalalahana betsaka an'ireo Italiana nandritra ny fahavaratra farany, izay niafara tamin'ny fitomboan'ny aretina sy ny fahafatesana.
Ity lesoka ity ihany dia efa hamerina azy amin'ny fetin'ny Krismasy ary ny faran'ny taona. Ny "fanazaran-tena amin'ny akanjo" vao haingana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo niaraka tamin'ny jiro maitso ho an'ny fividianana alohan'ny Krismasy, nampivarahontsana ny dokotera sy ny andrim-panjakana momba ny tahotra voamarina fa mety hiharan-doza ny aretina sy ny maty (vao haingana), noho ireo izay mitarika ny andian'ondry.
Ny ohatr'i Alemana
Na dia nametraka didy hentitra hidin-trano ho an'ny mponina aza i Alemana amin'ny fialantsasatra ho avy hatramin'ny 10 Janoary, ohatra iray arahin'ireo firenena eropeana hafa, ny mpanao politika italiana dia mbola misalasala amin'izay hatao. Taorian'ny nanamafisany tamin'ny Italiana fa OK ny fivezivezena ao anatin'ny faritry ny faritra mavo manerana ny firenena, dia nampahafantarina fa mety hisy ny fisaintsainana, ary hatramin'izao dia misy ny fivoriana isan'andro handraisana fanapahan-kevitra farany.
Ity fikorontanana ity izay nametraka olona an'arivony maro ho amin'ny dian'ny lamasinina sy fiaramanidina amin'ny toe-javatra sarotra sy ny fiatrehana ny fampihorohoroana ataon'ny mpandraharaha sy ny mpivarotra. Tsy latsa-danja amin'izany ahiahy izany ny famporisihan'ireo mandà.
Hiran'i Mameli (na “Rahalahin'i Italia”)
Hira nasionaly izy io ary anaovan'ny iray amin'ireo stanza misy azy manao hoe: “Angony izahay.” Amin'ny fiteny Mameli tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia midika hoe "mitazona anay hiray hina." Toa tsy ny Italiana rehetra no mahalala ny hirany, ary tsy misy atao mba hampatsiahivana azy ireo izany.
Fihirana ho an'ny Mameli Version ho an'ny ankizy
Raha ny lalàna, ny fampianarana ny fihirana any an-tsekoly dia tsy maintsy atao. Antoko mpihira ankizy iray, nandritra ny lanonam-panokafana ny Expo 2015, no nanova ny fiafaràn'ny fihiran'i Mameli ny hira tamin'ity fomba ity: ny andininy, avy amin'ny "vonona ny ho faty izahay" dia tonga "vonona hiaina izahay," niantso i Italia. Tianay esorina amin'ny ankizy ve io fanantenana io?
Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona
Ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona (UDHR) dia antontan-taratasy manentana ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'ny olombelona tsy azo ovaina, andiam-pitsipika mifototra amin'ny zava-bita sivily maro tao anatin'ny 70 taona lasa. Eleanor Roosevelt niantso azy io hoe "the Magna Carta of Humanity."
“Zon'olombelona tsy azo ovaina” - amin'ity tranga ity, tokony hanara-maso ny governemanta!
Ahoana ny fihazonana an'i Japon ho ambany ny aretina
Japon, firenena be mponina misy mponina 126 tapitrisa ary ny isan-jaton'ny be antitra indrindra eto an-tany dia mbola ambany noho ny maty noho ny COVID-19. Raha jerena ny zava-nisy rehetra dia 2,446 ny maty (latsaky ny iray andro monja any Etazonia amin'izao fotoana izao), tsy manararaotra paikady fitsapana mahery setra, ilay "3T" malaza izay soratana matetika. Fa kosa, Japon dia miankina amin'ny antsoina hoe "3Cs" hialana: "toerana mihidy, toerana be olona, ​​ary toerana akaiky." (loharano: ilCorriere.it)
Ny iray amin'ireo mampiavaka ny valanaretina COVID-19 dia ny nahavoa ny tany rehetra tamin'izany fotoana izany, ary nanaporofo izany ny tsy fitovian'ny fomba fanatontosan'ny firenena isan-karazany ny krizy ara-pahasalamana sy ny vokatra azony. Tamin'ny adihevitra italianina, be ny resaka ny raharaha soedoà na - ny mifanohitra amin'izay - ny tetika Koreana Tatsimo, fa saika tsy misy an'izany ny an'ny Japoney. Ny Ekonomista kosa dia nandrakotra an'io, na izany aza, tao amin'ny lahatsoratra iray izay azo nalaina lesona mahasoa ho an'i Italia (miaraka amin'ny fahafantarana ny fetrany).
Ho fanampin'ny 3Cs, ny governemanta Japoney dia mampitandrina amin'ny loza manokana 5 ao anatin'izany ny fisakafoanana misy alikaola, fisotroana sy fisakafoana amina vondrona misy mihoatra ny 4, ary miteny tsy misaron-tava amin'ny lavitra. Mazava ho azy fa tsy ho nisy ilana azy ireny fomba fijery ireny raha tsy noraharahain'ny olon-tsotra izany. Saingy nihaino ny torohevitry ny governemanta ny Japoney mba hijanona ao an-trano sy hihinana karoketra raha toa ka mampiseho soritr'aretin'ny virus coronavirus izy ireo, na dia tsy misy lanjany ara-dalàna aza ireo fampitandremana ireo.
Ireto misy lalàna izay azo arahana ihany koa any Italia, fa ny hevi-dehibe dia izany. Vonona hanao izany i Italia? Ny governemanta italianina, miaraka amin'ny fikirizany sazy, dia naneho fa tsy matoky ny olom-pireneny izy. Fa ny tsy hita ihany koa dia fifandraisana mazava sy tsy mazava avy amin'ireo andrim-panjakana. Angamba tokony hanomboka eo i Italia.